Niandry notrongisina noho ny “Raharaha Antsakabary” : nesorina amin’ny toerany ny minisitra Anandra Norbert | NewsMada
Niandry notrongisina noho ny “Raharaha Antsakabary” : nesorina amin’ny toerany ny minisitra Anandra Norbert
Nanaovana filankevitry ny minisitra manokana, teny Iavoloha mihitsy ny nanesorana ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, Anandra Norbert. Nisolo ny toerany, Andrianisa Mamy Jean- Jacques. Andrasana koa ny tohin’ny fanesorana amin’ny toerany ireo minisitra sasany rehefa tsy mahay manaja tena, mametra-pialana…
Herinandro aty aoriana nisehoan’ny doro tanàna tany Antsakabary, tapa-kevitra ny hanala amin’ny toerany ity minisitra ity ny fitondrana. Niandrasana ny fahatongavan’ny Praminisitra Mahafaly avy any Frantsa izany ary niarahana nanapaka tamin’ny filoha Rajaonarimampianina. Anisan’ny antony nanesorana azy ny filazany fa adala no nandoro ireo tanàna maherin’ny 500 tany Antsakabary, rehefa nidina tany an-toerana ireo polisy 40 taorian’ny fitsaram-bahoaka nihatra amin’ny mpitandro filaminana roalahy ny 18 febroary teo. Samy nandiso ny vaovao voarain’ity minisitra ity tamin’ny alalan’ny soratra maro sosona (SMS) avokoa ny rehetra. Anisan’izany ny mpitsara, ny zandary, ny pretra any an-toerana. Miahiahy ireo polisy ho nandoro ny tanàna avokoa izy ireo fa tsy misy izany adala izany. Nahitsy mihitsy aza ny Praiminisitra Mahafaly teny Ivato, ny talata teo ny amin’ny tokony nanamarinany ny vaovao nialoha ny nilazany izany amin’ny mpanao gazety.
Kolontsaina mamikitra amin’ny seza
Voaporofo aloha izany izao fa mbola tsy ao anatin’ny kolontsain’ny mpitondra eto amintsika ny miala am-panajana rehefa tsy mahomby na misedra olana lehibe ny departemanta tantanina. Mamikitra amin’ny seza hatramin’ny minitra farany ary miandry hotrongisina amin’ny filankevitry ny minisitra tahaka izao. Tsy tokony ho afa-bela koa anefa ireo nampanovina iraka tany Antsakabary sy ny mpaniraka. Tsy avela ho vitavita ho azy izany.
Tsy vao izao anefa ny resabe momba ity minisitra ity fa teo koa ny toe-pahasalamany ka nahatonga ny haino aman-jery mametraka azy hatrany ho anisan’ireo hoesorina amin’ny toerany raha misy ny fanovana governemanta.
Misolo ny toerany, manomboka izao hisahana ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, Andrianisa Mamy Jean- Jacques. Nisahana ny talen’ny sampam-pitsikilovana sy ny fanarahamaso ireo mpifindra monina eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ity minisitra vaovao ity mialoha izao fanendrena azy izao.
Tsy hananan-kavana ny raharaham-pirenena
Araka izany, tokony hametra-pialana fa tsy hiandry ny fihitaran’ny raharaha tahaka izao koa ireo minisitra hafa, ahitana olana samihafa amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny minisitry ny Fahasalamana na koa ny mpiara-miasa aminy manoloana ny fahafatesan’ny marary tato ho ato noho ny tandrevaky ny mpitsabo. Tahaka izany koa ny minisitry ny Fitaterana na koa ny misahana ny solika, manoloana izao tsy fahitana vahaolana momba ny fahasahiranam-bahoaka amin’ny fitaterana sy ny fiakaran’ny vidin-tsolika izao. Tsy resahina intsony ny tompon’andraikitra amin’ny vidim-bary… Misoko mangina miakatra ny vidiny. Tsy tokony hanana havana sy namana ny raharaham-pirenena. Efa sahirana sy latsaka anaty fahantrana ny vahoaka. Tratra farany hatrany, ianjadian’izao rehetra izao hatrany anefa izy… fahafatesana, doro trano, figadrana, asan-jiolahy, fahaverezam-pananana… Misy fetrany sy farany izany fa tsy vitan’ny pi-maso na fisehosehoana ivelany hidradradradrana fa noraisina ny fepetra… Ka noesorina ny minisitra iray ?